Falanqeynta kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada leh Juventus v Ajax lugta Labaad ee Champions League – Walaal24 Newss
Falanqeynta kulanka Xiisaha Iyo Xamaasada leh Juventus v Ajax lugta Labaad ee Champions League
Cristiano Ronaldo ayaa lagu wadaa inuu kusoo bilowdo kulanka Juventus ay Ajax ku wajaheyso Turin lugta labaad ee wareega 8da Champions League.
Guuldaradii 2-1 ee ka soo gaartay SPAL ee Serie A Sabtidii, Juventus waxa ay heysteen labo ciyaaryahan oo ka mid ah line-upka ay ku bilaabatay barbaro 1-1 ah ee ka dhacay Amsterdam iyo Ronaldo.
Ka hor kulanka talaadada, Ajax ayaa sagaal ka mid ah laga soo bilaabo lugtii hore ee wareega 6aad ee tartanka Excelsior.
Midkood, xiddiga qadka dhexe Frenkie de Jong, ayaa dhaawac jilibka ah kasoo gaaray qeybtii hore, waxaana uu shaki ku jiraa kulanka Turin.
Ronaldo ayaa la nasasiiyay ka hor kulankii lugta labaad ee wareega 16ka ee Juve, waxaana uu dhaliyay seddexleey kulankii Atletico Madrid si uu uga soo kabsado lugtii hore.
Tababaraha Ajax Erik ten Hag ayaa kalsooni ku qaba ka hor kulankaan. “Juventus waa kooxda ugu cadcad, gaar ahaan ka dib natiijada Amsterdam, haddii aan si fiican u ciyaarno, waan ka gudbi karnaa xadka kasta.
“[Massimiliano] Allegri waa mid aad u macquul ah, waxaana hubaal ah inuu u maleynayo qaab kale oo loo wajaho kulankaan marka loo eego usbuucii la soo dhaafay” Waxaan u baahanahay inaan horumarino qorshaha xeeladeena.
“Waan ku kalsoonahay sababtoo ah qaabka aan u ciyaareyno iyo tababarka.” Marka la barbardhigo kooxdii ku guuleysatay koobkii UEFA Europa League ee sannadka 2017, waan sii xoogeysanaa, waxaana ku ciyaareynaa ciyaarta.
Emre Can ayaa laga yaabaa inuu ku soo laabto ka dib markii lugta hore uu dhaawac ku seegay, lakiin Mario Mandzukic iyo Giorgio Chiellini ayaan loo magacaabin kooxda iyagoo sii wata inay ku soo laabtaan taam ahaansho buuxda.
Douglas Costa ayaa seegay kulankii isbuucaan isagoo wajahaya dhibaato muruqa ah laakiin waxaa laga yaabaa inuu ku soo laabto bedelka.
Sidoo kale De Jong, Ajax ayaa laga yaabaa inay ka maqnaadaan cusbitaallada Hassane Bande iyo Carel Eiting, kuwaas oo ku maqan dhibaatooyin waqti dheer ah.
Juventus ayaan laga badinin 10kii kulan ee ugu danbeysay ee Ajax tartamada oo dhan, hal kulan oo isku xigta oo hal dhinac la ciyaaraya koox kale oo Yurub ah (sidoo kale Bayern Munich vs Benfica).
Ka dib guuldaradii todobo guul darro ee sideed kulan oo ay ka soo horjeedeen taagerayaasha Talyaaniga, Ajax ayaan laga badinin afartii kulan ee ugu dambeysay oo ay badiso.
Juventus ayaa raadineysa inay gaarto semi-finalka Champions League markii seddexaad shantii xilli ciyaareed ee u danbeysay, sidoo kale waxay ka dhigeysaa afartii sanno ee ugu dambeysay 2014-15 iyo 2016-17.
Ajax ayaa raadineysa inay gaarto semi-finalka Champions League markii ugu horeysay tan iyo 1996-97, halka ay noqon laheyd kooxdii ugu horeysay ee Dutch ah tan iyo PSV 2004-05.
Kulankii ugu danbeeyay wuxuu ahaa markii seddexaad oo isku xigta Juventus oo barbaro gashay lugta hore ee tartanka Champions League oo ay marti u ahaayeen. Waxay u soo baxeen Rosenborg 1996-97 quarter-finalka, waxaana ay ka reebeen Man Utd 1998-99 semi- finalka.
Ajax ayaa laga saaray labo ka mid ah seddexdii kulan ee hore ee ay barbaro galeen lugta hore ee wareega Group-yada Champions League ee wareega group-yada, ugu dambeyntii 2005-06dii wareega 16ka oo ay ka badisay Inter Milan.
Juventus ayaa laga badiyay labo kulan oo ka mid ah shantii kulan ee ugu dambeysay oo ay garoonkooda ku ciyaaraan garoonkooda, waana tiradii ugu badneyd 45 kulan oo ay ka horyimaadeen tartanka Turin tartankaan.
Ajax ayaa badisay labadii kulan ee ugu dambeysay ee Champions League oo ay marti galiso, ugu dambeyntii waxa ay badisay tartankan intii u dhaxeysay November 1995 iyo March 1997 (7).
Weeraryahanka Juventus Cristiano Ronaldo ayaa goolal dhaliyey shantii kulan ee ugu dambeysay ee Champions League ay la ciyaartay Ajax, isagoo dhaliyay sideed gool. cayaaryahanka reer Portugal ayaa sidoo kale dhaliyay 51% goolasha guud ee tartanka wareega isreebreebka (64/125).
Dusan Tadic ayaa si toos ah ugu lug lahaa 53% Ajax 17 gool oo Champions League ah xilli ciyaareedkan (6 gool, 3 caawiye). Ciyaaryahankii ugu danbeeyay ee goolal badan ka dhaliya kooxda Ajax ee hal xilli ciyaareed Champions League waa Jari Litmanen 1995-96 (9).
Falaqeynta Hordhaca kulanaka Barcelona vs Manchester United lugta Labaad ee Champions League
Duqa Muqdisho oo la dardaarmay Ciidanka Ilaalada Deegaanka Xamar ee Munishiibiyo
Maxaabiis laga soo wareejiyay xabsiga dhexe ee Xamar laguna wareejiyay xabsi cusub
Wafdi ka Socda Dalka Masar oo Kormeer ku tagay Isbitaalka Xoogga iyo Kuliyadda Jaalle Siyaad
Karaash oo amar ku bixiyay in mudda 24 saac gudahood loga jawaabo, baahiyaha ka jira tulada Af-urur